अल्सर रोग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? - NA MediaNA Mediaअल्सर रोग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? - NA Media
वरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेतका टिप्सहरु...
व्यस्त जीवन शैली र विलाशिताका कारण पछिल्लो समय अल्सर रोगका बिरामीहरु बढिरहेका छन् । समयमा खाना नखाँदा वा भोको टेपमा बढी चिल्लो पिरो खानाले ग्यास्ट्रिक हुनका साथै आमासयको खाना नलीको सानो आन्द्राको मुखमा घाउ हुन्छ । यही घाउ वा प्वाललाईनै अल्सर भनिन्छ ।
धेरै नेपालीमा यो रोग देखिने भएकाले पनि अस्लरलाई मानिसहरुले सामान्य रुपमा लिने गरेका छन् । तर समयमै सचेत नहुने हो भने यो गम्भीर डरलाग्दो रोग हो । अल्सरकै कारण नेपालमा वर्षीनै हजारौको मृत्यु हुने गरेको छ । शहरी क्षेत्रको तुलानामा ग्रामीण क्षेत्रमा यो रोगका बिरामीको संख्या बढी हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय शरही क्षेत्रमा अस्वस्थ्य खानपान र आरामदायी जीवन शैलीका कारण यो रोग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यो रोगको लक्षण, उपचार र बच्ने उपायमा केन्द्रीत रहेर वरिष्ठ पेट रोग विशेषज्ञ डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेतले यी टिप्स दिएका छन्ः
अल्सर रोगका लक्ष्णहरु – छाती वा पेटको माथिल्लो भाग दुख्छ । – खाना खाइ सकपछि वा खाली पेट हुदा पनि पेट दुखी रहन्छ । –पटक पटक बान्ता हुन्छ । –बान्दा हुदा कहीलेकाही रगत देखा पर्छ । अल्सर लाग्दा खाना हुने खानेकुराहरु –दिनमा थोरै थोरै गरेर पाच–छ पटक स्वस्थ्यकर खानेकुरा खाने, धेरै एकैचोटी खानु राम्रो हुन्न् । –दुध, दाल पोस्ट भात , जाउलो, फलफुलहरु स्याउ, अनार, अंगुर, पाकेको कुरा,गाजार खाने । –प्रोटिन जन्य कुराहरु अण्डा, दाल,पनिर खानु राम्रो हुन्छ । –सम्भव भएसम्म चिसो दुख ३–४ पटक पिउदा हुन्छ , तर फ्रिजमा राखेको बढी चिसो भने पिउनु हुन्न् । अल्सर लाग्दा खाना नहुने कुराहरु –अत्याधिक पिरो, नुन चर्को, अमिलो दहि र मोही नखाने । –रक्सी, चुरोट सेवनबाट टाडै रहने । –तेलमा तारेको चिल्लो खानेकुरा र बढी मसला हालेको कुरा नखाने । –धेरै तातो र धेरै चिसो खानेकुरा नखाने । –बढी रङ हालेको चिया वा कफि पनि सेवन गर्नुहुदैन् । अल्सर लाग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु –धेरैबेर भोकै बस्नु हुदैन् । –मानसिक चिन्ता बढी नलिने । –रातमा धेरैबेर अनिदो बस्नु हुदैन् , तर दिउसो नसुत्दानै राम्रो । – कालो चिया खाने बानी हटाउनु पर्छ । –यो रोगले बढी पेट दुख्ने हुदा दुखाई कम गर्ने जथाभाबी औषधी सेवान नगर्ने । अल्सर रोग लाग्दा घरमै गर्न सकिने उपायहरु –शरीरलाई आराम प्रदान गर्ने । –अनाआवश्यक चिन्ताबाट मुक्त भई , खुसी वातवरणमा बस्ने । –नियमित ब्यायम गर्ने बानी बसाल्ने । –शरीरलाई बढी भार नपर्ने हल्का काम गरिरहने गर्नाले अल्सर रोगबाट बच्न सकिन्छ । यति हुदाहुदै पनि अल्सर रोग लागेको धेरै समय वितिसकेको भए तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह बमाजिम औषधी सेवान गर्नुका साथै चिकित्सकले भनेको कुरामा सचेत हुनु पर्दछ । अन्यथा अल्सररोगको समयमै उपचार भएन भने क्यानसर जस्ता गम्भीर रोग निम्तन पनि सक्छ । श्रोत रातोपाटि